Khilaafka kuraasta gobolada Waqooyi oo markale sii xoogeystay | Warbaahinta Ayaamaha
Khilaafka kuraasta gobolada Waqooyi oo markale sii xoogeystay
MUQDISHO-AYAAMAHA-Waxaa markale sii xoogeysanaya khilaafka ka taagan kuraasta gobolada Waqooyi ee Somaliland, kadib markii ay siyaasiyiinta kasoo jeeda goboladaas ay ku kala jabeen habraacii doorasho ee kasoo baxay Golaha Wadatashiga Qaranka.
Qaar kamid ah xildhibaannada Barlamaanka Soomaaliya ee ka soo jeeda deegaannada Soomaaliland ayaa sheegay, inay raacsan yihiin habraacyada doorashada xildhibaannada Golaha Shacabka, ee ay dhawaan soo saareen Golaha Wadatashiga Qaran.
Waxayna cambaarayn kala dul dhaceen siyaasiyiinta reer woqooyiga ee ka soo horjeeda habraacyada la soo saaray.
Garabka Mahdi Guuleed ayaa sheegay inay soo dhaweeyan harbaaca kasoo baxay shirkii Golaha Wadatashiga Qaranka, wuxuuna sheegay inay qeyb ka yihiin tanaasulaadka doorashada, si loo gaaro doorasho.
Waxay eedeyen culus u jeediyay garabka Cabdi Xaashi, kuwaasi oo ku tilmaamay rag dano gaar ah u dagaalamaya oo aan wadin mid umadeed